I-Cachagua: Indlu ethokomele / i-beachhouse ethokomele - I-Airbnb
I-Cachagua: Indlu ethokomele / i-beachhouse ethokomele
Itholakala endaweni yokungcebeleka ekhethekile yaseCachagua, le ndlu inombono oyinhlanhla wolwandle.
Itholakala ogwini lolwandle olukhethekile lwe-Cachagua, indlu inombono okhethekile olwandle.
Inamandla okuhlala abantu abangu-7 ahlelwe kahle emakamelweni okulala angu-3 namagumbi okugezela angu-3, igumbi lokuhlala elinendawo yomlilo, ikhishi elihlome ngokuphelele, ideski, amathafa, isitofu nendawo yokosa inyama.
Inamandla abantu abangu-7 ahlelwe ngokunethezeka emakamelweni okulala ama-3 kanye nezindlu zokugezela ze-3, nazo zonke izinsiza ezidingekayo ukuze kube nendawo yokuhlala ejabulisayo: Igumbi lokuhlala elineziko, ikhishi elihlome ngokuphelele, ideski, amathafa, umgodi womlilo kanye ne-barbecue.
I-Cachagua itholakala eduze nezindawo zokungcebeleka zaseMaitencillo naseLaguna eningizimu kanye neZapallar nePapudo enyakatho. Kungenzeka ukuthatha uhambo oluhle emikhondweni ehlukahlukene yasogwini emkhakheni. Ungaphinda ukhuphuke futhi wehle amagquma futhi ugibele ibhayisikili ngezindlela ezihlukahlukene zendawo.
Ibhishi elikhulu elitholakala nje imizuzu eyi-15 ukusuka endlini lidume ngobuhle balo, ukunwetshwa futhi ngoba lisetshenziselwa ukuntweza.
Kubathandi begalofu kunesifundo esihle esine-Club House. Kulabo abathanda ukugibela amahhashi, u-Cachagua uneklabhu yamahhashi, lapho kudlaliswa khona imidlalo ye-polo. Lo mkhakha unezindawo zokudlela ezinhle lapho unganambitha ukudla kwamazwe ngamazwe nezinhlanzi ezihlwabusayo nezilwane zasolwandle.
I-Cachagua itholakala eduze ne-Maitencillo ne-Laguna eningizimu ne-Zapallar ne-Papudo enyakatho. Kungenzeka ukwenza uhambo oluhle ngezindlela ezahlukahlukene zasogwini zomkhakha. Ungase futhi ukhuphuke futhi wehle amagquma futhi wenze ukugibela amabhayisikili emigwaqweni ehlukahlukene yendawo.
Ibhishi elikhulu, elitholakala nje ukuhamba imizuzu engu-15 ukusuka endlini, lidume ngobuhle balo, ukunwetshwa futhi ngoba lisetshenziselwa ukuntweza.
Kubathandi begalofu kunesifundo esihle neClub House. Kulabo abathanda ukugibela amahhashi u-Cachagua unekilabhu yamahhashi, lapho kudlaliswa khona imidlalo ye-polo. Lo mkhakha unezindawo zokudlela ezinhle lapho unganambitha ukudla kwamazwe ngamazwe kanye nezinhlanzi ezinhle kakhulu nezilwane zasolwandle.
Kuyohlale kukhona othile ozokwamukela futhi axazulule noma yimiphi imibuzo ongase ube nayo ngesikhathi uhlala.
Uzohlala ekhona ozokwamukela futhi aphendule noma yimiphi imibuzo ongase ube nayo ngesikhathi uhlala.